Lacagta taageerada ee koriimada ilmaha iyo kirada oo la kordhinayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hooya aadeeg wadata iyo gabadheeda oo hor ordaysa. sawir: JANERIK HENRIKSSON / TT
Lacagta taageerada ee koriimada ilmaha iyo kirada oo la kordhinayo
La daabacay måndag 11 september 2017 kl 14.30
Xukuumadda iyo xisbiga Vänsterpartiet ayaa isku afgartay in la kordhiyo taageearda dhaqaale ee barbaarinta dhallaanka (underhållsstöd) iyo taageerada kirada guryaha (Bostadstillägg) ee dadka howl-gabka ah la siiyo.
- Waxaan diiradda saarnay dadka ugu dhaqaale liita, ayey tiri Ulla Andersson afhayeenka siyaasadda dhaqaalaha ee xisbiga Vänsterpartiet.
Heshiiskan dhexmaray xukumadda iyo xisbiga Vänsterpartiet ayaa ku jira miisaaniyadda dayrta ee xukumadda oo hirgeli doona sannadka 2018 haddii baarlamanku ansixiyio. Heshiiskan oo lagu tilmaamay mid sinaanta loogu talogalay ayaa ku kaci doono 2,6 bilyan oo karoon.
Taageerada dhaqaale ee la siiyo waaladiinta carruurta keligood korsada ayaa kor loo qadayaa. Waalidka haysta carruur da'dooda u dhaxayso 11-14 sanno ayaa loo kordhin doonaa 150 karoon halka waalidka haysta carruur da'dooda u dhaxayso 15-18 sanno loo kordhin doono 350 karoon bil weliba. Lacag kordhintan ayaa bilaaban doonta bilowga sannadka cusub.
- Dad badan ayey lacag kordhintaan waxtar u yeelan doontaa, ayey tiri afhayeenka siyaasadda dhaqaale ee Vänsterpartiet Ulla Andersson.
Taageerada dhaqaale ee carruurta waxaa bixiya hey'adda caymiska försäkringskassan marka waalidka kale uusan baxinin lacagta korinta carruurta.
Sidoo kale hindisahan ayuu ku jira kaalmada kirada kuryaha in loo kordhiyo dadyowga howl-gabka ah, iyadoo saqafka taageerada dhaqaale ee kirada guryaha laga qaaday 5 000 oo la gaarsiinayo 5 600 oo karoon, sida uu xisbiga V sheegay. Qofka howl-gabka ah balse hela gunnada aasaaska ah ee howl-gabka ayaa lagu taageeri doonaa kirada guriga 470 karoon oo dheeri ah bil kasta.